တူမောင်ညို – ဘယ်သူ့ အကူအညီမှ မလိုတဲ့ဘဝ ပြည်သူတွေ ရောက်ပါစေ | MoeMaKa Burmese News & Media
တူမောင်ညို – ဘယ်သူ့ အကူအညီမှ မလိုတဲ့ဘဝ ပြည်သူတွေ ရောက်ပါစေ
Photo – facebook # water donation
သယံဇာတတွေ ပေါကြွယ်ဝတယ် ဆိုတဲ့ တိုင်းပြည်ကြီးဟာ အဆက်ဆက်သောအုပ်စိုးသူတွေရဲ့ ဖိနှိပ်သွေးစုပ်မှု၊ တစ်ဖက် သတ်ကိုယ်ကျိုးကြည့်မှု၊ စီမံခန့်ခွဲမှုညံ့ဖျင်းမှုတွေကြောင့် ပြည်သူတွေဟာ ဖောင်စီးရင်ရေငတ်နေကြရပါတယ်။ အကျင့်စာရိတ္တပျက်ပြားမှု ဆိုတာ တကယ်တော့ ဒီလိုဖိနှိပ်သွေးစုပ်မှုမျိုးစုံရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ အကျိုးဆက်သက်ရောက်မှုပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအခါမှာ ရာဇဝတ်ကျူး လွန်တယ်ဆိုတဲ့ပြစ်မှုနဲ့ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခံရပြန်ပါတယ်။ ဒီတော့ “ ဖိနှိပ်သွေးစုပ်မှု -ဆင်းရဲမွဲတေမှု – ပညာမဲ့မှု – ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန် မှု” ဆိုတဲ့ သံသရာ စက်ဝိုင်းဟာ ကရွတ်ကင်းလျှောက်သလို မရပ်မနားလည်ပတ်နေတော့တာပါပဲ။ ဒီသံသရာဘေးဆိုးက လွတ်မြတ်ဖို့ သော့ချက်က ဖိနှိပ်သွေးစုပ်မှုကို အကုန်အစင်ဖယ်ရှားရှင်းလင်းပစ်ဖို့နဲ့ ဖိနှိပ်သွေးစုပ်ခံဘဝကနေ အမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်စေဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီသံသရာကနေ ပြည်သူတွေကို နာကျင်မှုအနည်းဆုံးနည်းနဲ့ လွတ်မြောက်အောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်း လုပ်ပေးပါ။
One Response to တူမောင်ညို – ဘယ်သူ့ အကူအညီမှ မလိုတဲ့ဘဝ ပြည်သူတွေ ရောက်ပါစေ
Htwe on May 27, 2016 at 5:54 am
Thanks for the useful and truly article.
I don’t like waiting and expecting from some other people.
I don’t want to wait and expect from some other people.